အစအဦးကတည်းကအချိန်၊လူပျော်မွေ့တော်မူပြီအတိအကျအပေါ်ကအရာနှစ်ခုအားလုံးအခြားသူများက:အပြာကားဗီဒီယိုဂိမ်းများ။ အရှည်ကြာဆုံးကာလ၊ကျွန်တော်မအတော်လေးထွက်တွက်ဆသည်အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမအခါမွာနှစ်ခုပေါင်းစပ်! ကောင်းပြီ၊ကောင်းပြီရှိပါတယ်အနည်းငယ်ခရီးထွက်ရှိကြောင်းပြောဆိုချက်ကိုအရှိအကိုနှစ်ဦး၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်ဖို့စွာသင်တို့နှင့်အတူရိုးသားသော၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ၊သူတို့လုံးဝစို့။ ကောင်းပြီ၊စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မပို၏မရှိခြင်းနှင့်အတူဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဤဒိုမိန်းအတွက်:အခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများကိုကူညီဒီမှာ! သင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်အစောပိုင်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ၁၀၀%အကျူးလွန်ခံရဖို့အသွား-မှအတွက်ဤနယ်ပယ်။, ထိုနာမည်မှာအဖြစ်၊ကျွန်တော်တို့အားလုံးအကွာပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ဖို့လက်လှမ်းအဖိုးတန်အကြောင်းအရာများကိုမြင်ရုံမည်မျှထောက်ပံ့နိုင်စည်ပွင့်ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်။ မလိုက်မသွားပါနဲ့အတွေးဤသည်ရုတ်တရက်စီမံကိန္းသော်လည်း:အခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများရှိပါတယ်အပေါ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးစာကြည့်တိုက်၏ဂိမ်းများရှိသည်ကတည်းကစတင် ၂၀၁၆။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့အဆင်သင့်ဖြစ်အွန်လိုင်းသူတို့ကိုထားရန်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအထုပ်နိုင်မွေ့လျော်! တစ်ခုခုကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါအတွက်စိတ်ဝင်စား? ကောင်းစွာ၊ယခုတက်လက်မှတ်ထိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားဤလက်ငင်းနှင့်အထွက်စစ်ဆေးနေကျွန်တော်တို့ရဲ့လတ်ဆတ်သောခေါင်းစဉ်။, နောက်တစ်နည်း၊သင်ကြိုက်သလိုလျှင်အကြောင်းပိုမိုသိရန်စီမံကိန်းများ၊ဖတ်ချအောက်တွင်ပေးမယ်အပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကမ်းလှမ်းမှုကိုအပေါ်ဘာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အဲဒီအစားအပေါငျးတို့သအများကျွန်တော်တို့၏ကြက်ဥသို့တဦးတည်းတောင်း၊ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအခြေအနေများအတွက်မည်သည့်အစားသို့ကြွလာတဲ့ခရီးထိုကဲ့သို့သောငါတို့ဥစ္စာအဖြစ်သအနိုင်ကစားရန်အများကြီး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလက်ရှိ ၂၈ ခေါင်းစဉ်:အားလုံးအရာ၏လုံးဝသီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း။ ဤမငှားရမ်းထံမှအခြားကုမ္ပဏီများ၊မဟုတ်သလိုသူတို့အတွက်မည်သည့်လမ်းကာင့္လူ၏အပြင်ဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း။ အဲဒီထဲမှာ-အိမ်သူအိမ်ဖန်တီးနေကြတယ် ၁၀၀%သီးသန့်နှင့်အကျနော်တို့စီစဉ်ထားကြောင်း!, ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားကစားသည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်၊သင်ဖို့ရှိသည်သွားဖို့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ရာကိုမျှလောက်ကြီးစွာသောကြောင်းအခမဲ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း။ အဲဒီအတွင်း ၂၈ ကြိမ်၊ကျွန်တော်သွားကြပြီရန်အလွန်ကြီးစွာသောအတိုအရှည်သောသေချာစေရန်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောလမျးညှနျများမှာမြန်သည်။ ကျွန်တော်ပြောသောအခန်းကဏ္ဍကစားအားကစားပြိုင်ပွဲ၊ခေါင်းစဉ်၊ခံုး-စတိုင် battlers။ အိုး၊သင်တန်း–ငါတို့သည်တစည်းချိန်းတွေ့ simulators ရှိသည့်ပြည့်စုံသောလူတွေကိုအဘို့အထွက်ရှိသောမေတ္တာမျိုးကိုတက်တည်ဆောက်ရန်ရန်အကျင့်စရိုက်နဲ့ကြိုးစားမိမိတို့အကံကောင်းနှင့်အတူဒေသခံနဲ့တူတယ်။, အားလုံးဂိမ်းအပြည့်အဝထောက်ခံအားဖြင့်အသင်းနှင့်ခံယူပုံမှန်အတွက်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အကြောင်းအရာဝင်အဖြစ်နှင့်အဘယ်မှာသင့်လျော်သော။ သင်ဘေးကင်းလုံခြုံလက်၌ဖြစ်စေသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ခါႏွ၏နံပါတ်တစ်ဦးစားပေးသင်လိုချင်တာအခါတိုင်းမှဂိမ်းနှင့်ရှုပ်!
ကနေရသွား၊ကျွန်တော်သိသောအခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းသွားခဲ့ရာအရပ်ဖြစ်သောအမှန်တကယ်အခမဲ့။ ဒါကြောင့်၊အတိအကျ? ကောင်းစွာ၊အပင်၌ပင်လုပ်ငန်း၊ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေအများကြီးခေါင်းစဉ်အကြောင်းလဲကောင်းကောင်းတို၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ရိုးရိုးလေးအထိအသက်ရှင်နေထိုင်အဖြစ်။ ဥပမာ Cyberpunk ၂၀၇၇ နှင့်အမျှလူသားရဲ့ကောင်းကင်:နှစ်ဦးစလုံးနှင့်လိမ်လည်ခံရဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအတွက်သူတို့ရဲ့ဖန်တီး။ ဒီယူတာပဲ၊ဒါဟာ၏အစိတ်အပိုင်းအကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ကွာပေးခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့မည်သူမဆိုလိုလား။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်သက်တဲ့နည်းလမ်းအဝင်ရောက်ခွင့်တစ်ခုခုဖြစ်ရန်:သွားနှင့်ဒဏ္ဍာရီ၏လိဂ်:သင်ပေးဆောင်စရာမလိုပါတစ်ပြားလျှင်သင်ချင်ကြပါဘူးနှင့်မျှမရှိပစ္စည်းအားသာချက်မှလွှဲပြောင်းငွေပထမဦးဆုံးအရပျ၌။ ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းအရာအသစ်ထပ်ထည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒအပြန်အလှန်ခြင်းနှင့်ရလဒ်အဖြစ်၊ငါတို့သည်ပြုပါလိမ့်မယ်စေခြင်းငှါအကြင်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှဤအဆင့်အတန်းပိုနေမြဲကျား။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်၏အပြည့်အဝထောက်ခံမှုအတွက်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်။:ဒါဟာအမှန်တကယ်အလုပ်အများဆုံးလုပ်၏ပမာဏကို။, ယခုအခါဘူးမွာပါ microtransactions(ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာ)၊ဒါကြောင့်ကြော်ငြာနှင့်လွဴဒါန္း–အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကြီးမားသောစိုက်ပျိုးကန္–သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့အစီအစဉ်ကိုသုံးစွဲဖို့အကျော်ကိုလာမယ့် ၅ နှစ်မှဆက်လက်။ အိုး၊ဟုတ်ပါတယ်–ဒါဟာအလွန်ကြီးစီမံကိန်းနှင့်အတူအနာဂတ်အစီစဉ်။ ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးမကြာမီ!
အများကြီးရှိပါတယ်စည္းအင်္ဂါဒီနေရာမှာအတော်လေးအနည်းငယ်ဂိမ်းကစားသွားဖို့ရှိပါတယ်ထွက်စစ်ဆေးချင်။ မှာအုတ်အခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများသည်အပိုင်း–ဒီအပိုင္းမွာအဓိကရှယ်ယာသတင်းအမျိုးမျိုးသောဖါသစ္မ်ား၊ဘလော့ဂ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်တော့။ ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များလည်းမရှိပါအမွေအနှစ်၊ပဲကျော် ၃၀၊၀၀၀ ဘာသာ–တော်တော်လေးအေးလျှင်သင်သည်ငါ့ကိုဆုကိုတောင်း! ကျွန်တော်လည်းတော်တော်တက်ကြွတတ်သောဆာဗာချင်ပါလိမ့်မယ်ထွက်စစ်ဆေးချင်လျှင်သင်လက်ငင်းဆက်သွယ်ရေး။, ဤသည်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်ချင်လျှင်သင်ဆွေးနွေးဖို့တိကျတဲ့ဂိမ်းအဖြစ်၊အသီးအသီးခေါင်းစဉ်ရှိပါတယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် subsection–မရမ်းကိုတင်! ဟုတ်ပါတယ်၊သင်တို့၌အစဉ်သို့သွားဆာဗာဆွေးနွေးညမ်းဂိမ်းများနှင့်ပင်မျှဝေပါဌ်များနှင့်အခြားသူဘာပဲ။ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွအုပ္ဆုိင္အတန်ငယ်ဒီဇိုင္းအတွက်တုံ့ပြန်ချက်ရုပ်သံလိုင်း:သေချာစေရန်အရောင်းရင်းနောက်ကွယ်ကအဆိုပါဂိမ်းဘယ်လိုသိနေရတဲ့အပေါ်အဘယ်ပြုတိုးတက်စေရန်သင်တို့၏ခြုံငုံအတွေ့အကြုံ။ အခုချက်ချင်း၊ကျနော်တို့ပြေးမှတဆင့်အစမ်းရဲ့စမ်းသပ်မှုရမှတ်မြင့်မားတွမ်ကကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့ဖို့နောက် ၃ လပေါင်းများစွာ။, ဤထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်အချိန်ရုံးတင်စစ်ဆေးများအတွက်အမျိုးမျိုးသောခေါင်းစဉ်နှင့်ဆုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်အတွက်ဂိမ်းအကျိုးကျေးဇူးများ၊အအေးအိမ်-အသက်လုယက်နှင့်ပို။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါအသေးစိတ်အချက်အဒီ–ဒါဟာလိမ့်မည်မျှဝေမကြာမီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်!
ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းတော့၊သင်လေ့လာသင်ယူပြီးပြီအတော်လေးတွေအများကြီးကကျွန်ုပ်တို့စီမံကိန်းနှင့်အဘယ်သို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖို့ကြိုးစားနေဒီမှာလုပ်။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သောလိင်ဂိမ္းလေထုအရာတစ်ခုခုသင်အမှန်တကယ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်နောက်တဖန်အ၊ငါတို့သည်ဖိသင်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်အခမဲ့သည်။ ဒီနိုင်စွမ်းပေးသည်ထွက်ကြိုးစားဖို့သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်လျှင်လုံးဝကျေနပ်မှုမဟုတ်ပါဘူး၊ကိုယ့်လက်ျာဘက်ရှေ့ဆက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးထွက်–မညှဉ်းဆဲ၊အဘယ်သူမျှမငှက်။